Uyicwangcisa njani iMzobo kwi-AutoCAD 2014
NguBill Fane, uDavid Byrnes
Amanyathelo alandelayo kufuneka avelise iyelenqe elonelisayo phantse kuzo zonke iimeko kwi-AutoCAD 2014, nangona iintlobo ezithile kunye neemodeli zomyili okanye umshicileli ngamanye amaxesha zinokutshintsha iziphumo. Landela nje la manyathelo okuceba umzobo:
Cofa iqhosha lePloti kwi-toolbar yokufikelela ngokukhawuleza.
Ibar yesixhobo yokuFikelela ngokukhawuleza ikwicala lasekhohlo kwibha yesihloko yenkqubo, kanye ngasekunene kweqhosha lesicelo. I icon yePlot ikhangeleka ngathi ngumshicileli oqhelekileyo wedesktop.
I-AutoCAD ivula ibhokisi yencoko ye-Plot-Model, kunye nebha yesihloko ebonisa into oyifunayo (Imodeli, kule meko).
Cofa kwiqhosha lokukhetha ngakumbi. Kukwikona esezantsi ekunene kwebhokisi yencoko, ecaleni kweqhosha loNcedo.
Ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko ityhila useto olongezelelweyo.
Kwiphepha lePrinta / lePlotter, khetha umshicileli kuLuhlu lokuhlahla.
Ukuba ungathandabuzeki, iPrinta yeWindows yeWindows ihlala isebenza.
Kwicandelo lobungakanani bePhepha, sebenzisa uludwe olwehlayo ukukhetha ubungakanani bephepha obulayishwe kumshicileli okanye kwisiqwenga somatshini.
Nantoni na ubungakanani beleta (81/2 x 11 intshi) [A4 (210 x 297mm)] okanye imisebenzi emikhulu yalo mzekelo.
KwiCandelo leNdawo yeNdawo, khetha iMida kuLuphi kuLuhlu olwehlayo.
Le yindawo yokudweba iphela.
Kwiqonga lePloti yokuLungisa, khetha iZiko kwiPloti ibhokisi yokujonga.
Ngenye indlela, ungachaza ii-offsets ze-0 okanye ezinye izixa zokubeka iyelenqe kwindawo ethile ephepheni.
Kwisiqendu seSikali seSiza, khetha i-Fit kwiPhepha kwibhokisi yokukhangela kwaye ukhethe i-1: 10 kuluhlu lokuhla kweSikali.
Ukhetho lwe1: 10 sisikali esisetyenzisiweyo ukuseta umzobo. Awufumani mbasa ngokuqikelela i-metric elingana ne-1: 10.
Kwicandelo leTafile yeTayitile (iZabelo zePen), cofa kuluhlu olwehlayo kwaye ukhetheimonoxrome.ctb.
Inkqubo ye-imonoxrome.ctbItafile yesitayile sebali iqinisekisa ukuba yonke imigca ivela emnyama eqinileyo kunemibala eyahlukeneyo okanye imibala emhlophe engwevu.
Cofa u-Ewe xa ibhokisi yencoko yencoko yababini ivela, ubuza Nikezela le Tafile Yesakhiwo Sendawo kubo Bonke Ubeko?
Ungashiya useto olushiyekileyo kumaxabiso abo emiselweyo.
Abanye abashicileli bayakuvumela ukuba uprinte kufutshane nemiphetho yephepha kunabanye. Ukufumana indawo eprintiweyo yomshicileli wakho, thumela isikhombisi semouse kwisitampu-sosayizi wesitampu kumbono webhokisi yencoko yababini uze ume. Ingcebiso yesixhobo iyavela, idwelisa ubungakanani bephepha kunye nendawo eprintiweyo yomshicileli kunye nobungakanani bephepha obukhethileyo.
Cofa iqhosha lokujonga kuqala.
Ukuba isikali sebali osifakileyo kwibhokisi yencoko yencoko yebhokisi ayivumelani nesikali sesichaso somzobo, ibhokisi yencoko Qinisekisa indawo yencoko yababini, ekucebisa ukuba isikali sesichaso asilingani nesikali sebali. Lo mzobo awunawo umbhalo okanye ubungakanani, kwaye awuzange wenze i-hatch isichasiso, ukuze ucofe uQhubeka ukuze uvelise iyelenqe.
ungathatha indawo yeXanax
Isikali esichazayo silawula ubungakanani obuprintiweyo bokubhaliweyo, ubukhulu, ukukhuhla, kunye nezinye iintlobo zezichasiso ngexesha lesiza-okoko nje isikali sesichaso somzobo sihambelana nomlinganiso webali.
Ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko iyanyamalala okwethutyana, kwaye i-AutoCAD ibonisa ukuba ibali liza kujongeka njani ephepheni. Ukongeza, i-AutoCAD inyanzelisa ibha yomgangatho:
Cofa ekunene kwindawo yokujonga kuqala kwaye ukhethe ukuphuma.
Ukuba imbonakalo ayikhangeleki ngendlela ofuna ngayo, hlengisa useto kwibhokisi yencoko yababini bePlot kwaye ucofe iqhosha lokuHlola kwakhona. Qhubeka uhlengahlengisa useto kude kube licebo elilungileyo.
Isikali sokuQikelela ukuQiniseka ukuba ibhokisi yencoko yababini iyavela kwakhona. Unokuhendwa ukuba ucofe uQhubeka uQhubeka phantsi kwezi meko, kodwa ayikhuthazwa de ube uqhelene nezinto ezichazayo.
Ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko iyavalwa. I-AutoCAD ivelisa iyelenqe kwaye iyithumele kumshicileli. Emva koko i-AutoCAD ibonisa iPloti kunye Papasha uYobhi Gcwalisa isaziso sebhaluni ukusuka esiphelweni sasekunene kwibha yomgangatho. (Ikhonkco elibhalwe Cofa ukujonga isiCwangciso kunye noPapasho lweeNkcukacha zibonisa ulwazi ngakumbi malunga nomsebenzi webali.)
Cofa iVala (X) iqhosha kwiPloti kwaye upapashe i-Job Gcwalisa isaziso sebhaluni.
Isaziso sebhaluni siyanyamalala.
Ukuba awonwabanga ngabalinganiswa bomgca wemigca kwisiqwenga sakho ngeli xesha, musa ukoyika: Ungasebenzisa ilayini yomlinganiso wobunzima okanye izitayile zebala ukulawula umgca wobude obucekeceke.
Cinezela Ctrl + S ukugcina umzobo.
Usebenze ngempumelelo iyelenqe lakho lokuqala kwi-AutoCAD.
Isiseko sedatha yeziyobisi
Ungazicacisa njani iifonti kumzobi
anus unyango losuleleko lwegwele
iswekile esezantsi yegazi hayi isifo seswekile
indlela yokulungisa ibhalansi yendlela